Nopotehiko ny WordPress 2.1 | Martech Zone
Nopotehiko ny WordPress 2.1
Alakamisy Janoary 25, 2007 Douglas Karr
Eny ary, miala amin'ny filokana ny rehetra…. Fantatro fa ity no lohahevitra tsy misy dikany. Tsy nanandrana 'namboatra' ny lohahevitro taloha sy ny kaody manokana napetrako tao aho fa nanapa-kevitra ny hanafoana azy manontolo. Mijanona kely fotsiny amiko mandritra ny fotoana fohy rehefa manangana ny lohahevitra voalohany ho an'ny WordPress aho. Hotehiriziko ity lohahevitra ratsy ity mba handrisika ny tenako hamita ilay lohahevitra haingana kokoa. Nanomboka an'io aho halina!
Azoko atao ve ny mamerina ny volako, Wikipedia?
Bubble, Reflections - Ambient Glow!
Janoary 25, 2007 amin'ny 3:42 PM
Mirary anao ho tsara vintana. Nandeha tsara ny zava-drehetra tamiko, saingy niandry ny fianjerana aho. Miahiahy foana aho fa hisy zavatra tsy mety hitranga rehefa manavao ny WordPress aho, saingy hatramin'izao dia tsy nisy izany.
Janoary 25, 2007 amin'ny 4:20 PM
Mitranga [na] fantatro hoe manao ahoana izany. Mirary soa ary ankafizo ity fahafahana ity hanovana ny endrikao sy ny fahatsapanao.
Janoary 25, 2007 amin'ny 5:05 PM
Lohatenin'ny lahatsoratra mahafinaritra 🙂 Somary nikoropaka ny rohy sary taorian'ny fanavaozana WordPress nataoko, fa raha tsy izany dia somary malama.
Matoky aho fa ho slickmatic ny lohahevitrao vaovao!
Janoary 25, 2007 amin'ny 5:10 PM
Mirary soa Doug. Niato ny fanavaozana ho an'ny WordPress 2.1 aho satria manahy ny hijaly amin'izany.
Efa nanao lohahevitra WordPress vitsivitsy aho taloha, koa aza misalasala miantso ahy raha mila fanampiana momba izany ianao.
Janoary 25, 2007 amin'ny 6:00 PM
Heveriko fa tsara ny lohahevitry ny "default" anao! Tsy dia ratsy araka ny eritreretinao izany. Ary heveriko fa vao avy noporofoinao fa na ny lohahevitry ny "default" aza dia mety ho tsara amin'ny fanitsiana kely fotsiny.
Saingy, ny fananana lohahevitra namboarina dia mamorona maha-izy azy – izany no atao hoe fitorahana bilaogy ary isika rehetra dia mila manana bilaogy tsy manam-paharoa izay tena azontsika aseho amin'izao tontolo izao!
Tsy andriko ny hahita ny lohahevitrao vaovao.
Janoary 25, 2007 amin'ny 6:02 PM
Heveriko fa sigara no tianao holazaina, niala tamin'ny sigara aho 30 taona lasa izay, manaiky sigara indraindray, fa tsy mifoka sigara.
Janoary 25, 2007 amin'ny 6:03 PM
Wow - fanohanana mahafinaritra. Misaotra ny rehetra! Tena tiako ny fahatsoran'ity lohahevitra ity. Hojereko raha azoko ampidirina amin'ny lohahevitro ny fahatsorana sasany – somary sahirana ny farany!
Oay! Ity dia lohahevitra WordPress tsara tarehy iray azonao atao !!! Inona no iantsoana azy? 🙂
Oh, mitsiky tsy mifoka sigara, niala tamin'ny bar snickers koa aho
Janoary 25, 2007 amin'ny 7:14 PM
azoko tsara. Ny tranokalako vaovao dia vonona ny handeha aho mandra-pahapotiko ny lohaheviko koa. Ny fikoropahana kely dia nanaratsy ny raharaha. Tsy maintsy nanamboatra azy io indray aho. Nandritra ny fotoana rehetra dia rava ny tranokalako teo aloha – tsy fitorahana bilaogy. Amin'ny ankapobeny, efa ho iray volana aho no tsy nanana tranonkala. Ary mpamorona orinasa web aho.
Janoary 25, 2007 amin'ny 7:20 PM
Ry lehilahy ô! Vao avy notapahin'i John Chow aho! ô!!!
Jan 26, 2007 ao amin'ny 5: 44 AM
Hitako fa madio kokoa noho ny taloha izany. Manantena aho fa mahandro zavatra madio sy kanto ianao.